merolagani - थैलीभेटी चढाएर आएको व्यक्तिले त झनै नियामक निकायमा बसेर काम गर्न सक्दैन
Nov 22, 2021 06:03 PM MeroLagani
डा. सुरवीर पौडेल
अब दुई वर्षको लागि धितोपत्र बोर्डमा अर्को नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पुरानो नेतृत्वले सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला भन्ने अन्यौल त कायमै छ । बोर्डको अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति यसमा बढी जिम्मेवारी हुन्छ । मन्त्रालयले नियुक्ति गर्दा विषय विज्ञ चाँहि हेर्नुपर्छ । धितोपत्र र पुँजी बजार सम्बन्धी विज्ञता भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षको नजिकको मान्छे जस्ता मापदण्डबाट अध्यक्ष छनोट हुनुहुँदैन । अहिले त झन बजारमा यति रकम दिए पछि बोर्डको अध्यक्ष पक्का भन्ने कुराहरु पनि सुन्न पाइन्छ । पछिल्लो ढोकाबाट लेनदेन पनि हुन्छ भन्छन् । यस्ता आधारबाट पुँजी बजारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको अध्यक्ष नियुक्ति भयो भने चाँहि राम्रो हुँदैन । यस्तो मापदण्डबाट नियुक्त भएको व्यक्तिले नियामक निकायमा बसेर काम गर्न सक्दैन । थैलीभेटी चढाएर आएको व्यक्तिले त झनै नियामक निकायमा बसेर काम गर्न सक्दैन । उसले विभिन्न बहानामा लोभलालच गर्न थाल्छ । नियामक निकायमा आउने व्यक्ति लोभलालचमा फस्न थाले भने त बजारको स्वच्छ विकास हुँदैन । पुँजी बजारको स्वच्छ विकासको लागि सरकार चलाउनेले लोचलालच नगरी बजार विज्ञकै छनोट गर्नुपर्छ । नातावाद, कृपावाद त्यागेर उच्च नैतिकवान व्यक्तिको छनोट भएमा अहिले भएको जस्तो परिस्थिति जन्मन पाउँदैन । निवर्तमान अध्यक्षको कारण गिर्दो शानलाई नयाँ अध्यक्षले अझ उँचो बनाउनु पर्नेछ ।
विषय विज्ञ एव उच्च नैतिकता भएको मान्छेले मात्रै अहिलेको परिस्थितिलाई बुझेर २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसार पुँजी बजारलाई हाँक्न सक्छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति सबैलाई समन्वय गरेर लैजान सक्ने व्यक्ति नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले त फ्रन्टलाइन रेगुलेटरको रुपमा रहेको नेप्सेलाई पनि काबुमा राख्न सक्नुपर्छ धितोपत्र हाँक्ने नयाँ अध्यक्षले ।
पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले वस्तु बजारलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी पनि जानकारी राख्ने व्यक्ति नै आउनुपर्छ । उसले बजारका सरोकारवालासँग छलफल गरेर बजार विकासको लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नयाँ अध्यक्षले सबै सरोकारवालाको कुरा बुझेर सोही अनुसार नीति बनाउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा नै काम गर्नुपर्छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षक भनेकै धितोपत्र बोर्ड भएकाले तिनीहरु नठगिउन भन्नै नै बोर्डको चाहना हुनुपर्छ । बोर्डका कर्मचारीहरु ठूला खेलाडीको नियन्त्रणमा रहेर तिनीहरुको अनुसार चल्नु भएन । बजार स्वतन्त्र रुपमा आफ्नै गतिमा चल्न पाउने सुनिश्चतता बोर्डले गर्नुपर्छ । बजार माग र पूर्तिको आधारमा चल्न सकोस् । खेलको नियम अनुसार बजारलाई चलायमान बनाएर रेफ्रिको काम चाँहि धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व गर्ने काम भनेको अध्यक्षको हो भन्ने कुरा नयाँ अध्यक्षले बुझ्नु पर्छ । बजारको विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन्, ती सबै अध्ययनहरुको निचोड निकालेर नयाँ नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
मेरो पालामा नियमावलीहरु ल्याउँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग नियमावलीको मस्यौदाको विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गर्थे । अहिले पनि त्यही प्रक्रिया अनुसार नियमावली आउँछ कि आउँदैन थाहा भएन । सीडीएससी, क्रेडिट रेटिङ, सामुहिक लगानी कोषको नियमावली बनाउँदा धेरै चरणमा छलफल गरेर मात्रै लागू गराएको थिए । धितोपत्र बोर्डको काम दण्डित गर्ने मात्र होइन, सबैसँग मिलेर बजारको विकासको लागि बोर्डले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको बदलिंँदा परिस्थिति अनुसार नियमावली बनाएर नियमन गर्नुप¥यो, यो बोर्डको पहिलो दायित्व हो । समसामयिक रुपमा नियमावली संशोधन पनि गर्दै जानुपर्दछ ।
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ कमोडिटी मार्केटको लागि छुट्टै विभाग बनाएर नियमन गर्नु पर्नेछ भने धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर तिनीहरुमार्फत बजारमा नयाँ नयाँ सेवाहरु लगानीकर्तालाई दिलाउन बोर्डले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नागरिक लगानी कोषले नागरिक स्टक डिलरको काम गरे जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पनि यस्तै स्टक डिलरको काम गर्न दिनुपर्छ । स्टक डिलरहरु धेरै बजारमा आए पनि बजारको दिगो विकासमा यसले योगदान गर्छ । बजार अस्वभाविक रुपमा भएको घटबढलाई यस्ता स्टक डिलरले रोक्ने काम गर्छ । बजार अस्भाविक रुपमा बढ्दा शेयरको आपूर्ति बढाउने र बजार अस्भाविक रुपमा घट्दा माग बढाउने काम स्टक डिलरले गर्ने हुँदा बजार चलायमन हुन यसले सहयोग गर्नेछ ।
(मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. सुरवीर पौडेलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)